Essential ဖုန်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ယူနစ် ၈၈၀၀၀ သာရောင်းချနိုင်ခဲ့သည် Androidsis
Essential ၏လမ်းကြောင်းနှင့်၎င်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖုန်းသည်အလွယ်ကူဆုံးမဟုတ်ပါ။ အစကတည်းကကုမ္ပဏီတွင်ပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်ဖုန်းသည်အခြားလက်ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့်အဆင့်အထိနေထိုင်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းကိုလွှတ်တင်ရာတွင်၎င်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်နှောင့်နှေးမှုကိုထည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် ပြproblemsနာများနှင့်ပြည့်ဝ၏အခြေအနေ.
အစကတည်းက Essential Phone ရောင်းအားသည်မကောင်းကြောင်းခန့်မှန်းရသည်။ ယခုနှစ်မကုန်မီ ၅၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနောက်ဆုံးအချက်အလက်များရရှိပြီးဖြစ်သည်။ နှင့်ရောင်းအားစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကြသည်။
Essential Phone သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်စျေးကွက်ထဲရောက်နေတဲ့ခြောက်လအတွင်းမှာစားသုံးသူတွေကိုအနိုင်မရခဲ့ဘူး။ ကတည်းက ဖုန်းအရောင်း 88.000 ယူနစ်မှာရပ်။ စျေးကွက်ရှိအဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။
. @အာရူဘင်'s @အရေးပါသော စမတ်ဖုန်းသည်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်ဝေးကွာနေဆဲဖြစ်သည်။ 2017 ခုနှစ်တွင်, က 90K ယူနစ်ထက်နည်းတင်ပို့ (လွှတ်တင်ပြီးနောက်ပထမခြောက်လ) pic.twitter.com/NHVlA2Gjzr
- Francisco Jeronimo (@ fíritu) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2018
ဤသည် Andy Rubin ၏လက်မှတ်များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောထိခိုက်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ပြproblemsနာများသည်အစကတည်းကရှိခဲ့လျှင်၎င်းကိန်းဂဏန်းများသည်လုံးဝအထောက်အကူမပြုပါ။ သူတို့ကအခြေအနေတွေမကောင်းဘူးဆိုတာပြတဲ့လက္ခဏာပါ။ စျေးကွက်တွင်၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုဆီးတားနိုင်ကြောင်းအရာတစ်ခုခု။
ဤကိန်းဂဏန်းများအရ၎င်းတို့သည်ဈေးကွက်ရှိအဓိကပြိုင်ဘက်များနှင့်အလွန်ဝေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဈေးကွက်တွင်ခြေကုပ်ယူရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖုန်းဖြင့်သုံးစွဲသူများကိုအနိုင်ယူရန်မစီမံနိုင်ခဲ့ပါ ဤသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနံပါတ်များတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။
ဒုတိယမျိုးဆက်ဖုန်းများစတင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစီအစဉ်များ။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က၎င်းတို့သည်ဤကိရိယာအသစ်ကိုစတင်စီစဉ်နေပြီဟုပြောခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်များဆက်လက်တည်ရှိနေမည်၊ သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သို့ဖြစ်သွားမည်ကိုမူမသိရသေးပါ။ သို့သော်သူတို့သည်စျေးကွက်တွင်ခြေကုပ်ယူရန်ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်။ မရှိမဖြစ်ဖုန်းရောင်းအားကြောင့်ဖြစ်သည် လူအများကြောက်ရွံ့သောအရာကိုအတည်ပြု, ဖုန်းကပျက်ကွက်တယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Essential Phone သည်ခြောက်လအတွင်း ၈၈,၀၀၀ ယူနစ်ရောင်းချခဲ့သည်
Valentine's Day ကိုအခမဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ